မိုးကြီးတဲ့ လပြည့်နေ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မိုးကြီးတဲ့ လပြည့်နေ့
Posted by ဆူး on Jun 25, 2011 in My Dear Diary | 26 comments
ဆူး စိတ်ကူး မိုးကြီးတဲ့ လပြည့်နေ့
ရာသီဥတု သာယာတဲ့ လပြည့်နေ့ တနေ့ အခါကြီး ရက်ကြီး အိမ်နားက အဒေါ်ကြီး က ဘုရားသွားမယ် ဆိုလို့ မေမေ နဲ့ ဆူး တူတူ လိုက်သွားတယ် အဲဒီတုန်းက ဆူး အသက် ၅နှစ် ၆နှစ်လောက်ထက် ပိုမယ် မထင်ဘူး။ အဲဒီ အဒေါ်ကြီး မှာ ကလေး ၄ယောက် မွေးထားတာ ဆိုတော့ သူ့ ကလေးတွေ နဲ့ ဆူး တို့ သားအမိ ၂ယောက်နဲ့ ဆိုတော့ အားလုံး ၇ယာက် ဘုရားကို လေးဘီးကား ငှားပြီး သွားကြတယ်။
ဘုရားပေါ် ရောက်တော့ ကလေးတွေ အုပ်စုလိုက် ဟိုပတ် ဒီပတ် ဆော့ ကစား လူကြီးတွေ ဘုရားရှိခိုးကြတယ် ဘုရားမှာ ရှိနေတုန်း ရုတ်တရက် မိုးသားတွေ တလိမ့်လိမ့် တက်လာတော့ ထီးကလည်း လူကြီး တွေ အတွက်ပဲ ပါတာ ဆိုတော့ မလုံလောက်ခဲ့ဘူး။ မေမေက အဲဒီလို အပြင်ထွက်လေ့ မရှိဘူး အိမ်နားက အဒေါ်ကြီး ကလေးတွေ နဲ့ သွားမှာ မိုလို့ အဖော် ကောင်းတော့ လိုက်သွားတဲ့ သဘောမျိုးပေါ့။
ရုတ်တရက် မိုးတွေကလည်း ရွာလာတော့တယ်။ အရမ်းကို သည်းကြီးမဲကြီး ရွာလာတော့ ဇရပ်တခုပေါ် မှာ မိုးစဲ မလား ထိုင်စောင့်နေကြတယ်။ မိုးရွာတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ဇရပ် ပေါ်မှာ မိုးခိုတဲ့ လူတွေ အများကြီးပါပဲ။ မတ်တပ်ရပ်စရာ နေရာ သိပ်တော့ မရှိလို့ ကလေးတအုပ် ဆော့ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ မိုးရွာနေတာကို ငေါင်တောင်တောင် နဲ့ စောင့်ကြည့်နေယုံပဲ ရှိပါတော့တယ်။ မိုးကလည်း လုံးဝ မရပ်တော့ မဖြစ်တော့ဘူး ဆိုပြီး ဘုရားပေါ်က ထီး မလုံ့ တလုံ ဆောင်းပြီး ဆင်းလာကြတယ်။
ဆူး ကတော့ မေမေ နဲ့ တူတူ ထီး၁လက် ဆောင်းထားတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ အဒေါ်ကြီး သားအမိ တွေကတော့ ၅ယောက် ဆိုတော့ မိုးတွေ အားလုံး စိုကုန်ကြတာပေါ့။ အစ ပိုင်းတော့ မေမေက ချီ ထားတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ မချီ နိုင်တော့ဘူး။ ဘုရားအောက်ခြေ ရောက်တော့ ကားငှားဖို့ ကြိုးစားတယ် ဖြစ်ချင်တော့ ရေတွေ တအားစီးနေလို့ ကားတွေ မနည်းသွားနေရတာနဲ့ ကားငှားလို့ အဆင်မပြေ ဘစ်ကား စီးဖို့လည်း အဆင်မဖြေ ဖြစ်နေတာနဲ့ မထူးပါဘူး စိုကုန်မှတော့ အိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးတော့ လမ်းလျှောက်မယ် ဆိုပြီး လမ်းလျှောက်ပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။
မိုးတွေကလည်း ဆက်တိုက် ရွာတာ မရပ်ဘူး ရေတွေကလည်း ဒလဟော စီးနေပါတယ်။ မှတ်မိသလောက် လူကြီး အရပ်နဲ့ ဒူးလောက် ဖြစ်နေတယ်။ ကလေး တယောက် အရပ်နဲ့တော့ ရင်ခေါင်းလောက် ဖြစ်မလား ခါးလောက် ဖြစ်နေမလားပဲ။ အတူတူ လာတဲ့ အဒေါ်ကြီး ရဲ့ ကလေး အကြီးဆုံးမှ ဆူး နဲ့ ရွယ်တူ ဆိုတော့ ကျန်ကလေး ၃ယောက်က ၁နှစ်စီ ငယ်ကြတယ်။ အငယ်ဆုံး နှစ်ယောက်ဆို ၁နှစ်ကျော်နဲ့ ၂နှစ်ကျော် ဆိုတော့ မေမေ က သနားတာနဲ့ သူ့ကလေး အငယ် ထဲက ၁ယောက်ကို ချီပေးပြီး လမ်းလျှောက်ကြတယ်။ မိုးတွေ ရွာပုံကတော့ တော်တော် စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းလောက် အောင်ပါပဲ။ မိုးတွေ အရမ်းရွာသလို ရေတွေ လည်း တက်နေတော့ ကြမ်းပြင် အောက်ခြေ ကို လုံးဝ မမြင်ရဘူး ရေနောက်တွေ ဆိုတော့ အပေါက်တွေ ရှိနေရင် ချော်မလဲအောင် သတိထားရပါတယ်။ ပလက်ဖောင်း အနိမ့် အမြင့် မညီတာတွေ က ခြေထောက် နဲ့ စမ်းပြီး သွားကြရင်းနဲ့ အိမ်တော့ ရောက်သွားပါတယ်။ အိမ်မှာ နွေးနွေးထွေးထွေး နေပေမဲ့ မိုးမိတဲ့ ဒဏ်ကြောင့် ကလေးတွေ အားလုံး ဖျားသွားခဲ့တယ်။
ရေတွေ တက်နေတာကတော့ ကလေး တယောက် အရပ်နဲ့ ဆိုတော်တော် မြင့်နေတဲ့ အပြင် တကိုယ်လုံး ရေတွေ စိုရွဲလို့ ညစ်ပတ် ပေပွ နေတာပါပဲ။ ထိုနေ့ကတော့ ဘ၀ မှာ မှတ်မှတ်ရရ မိုးများတဲ့ လပြည့်နေ့ တနေ့ပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
လပြည့်နေ့ ဆိုရင် မြန်မာ လူမျိုးများ ဘုရားသွားကြလို့ တိုးမပေါက်အောင် စည်ကားတာ ကြုံရမြဲပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ မှတ်မှတ် ရရ မိုးကြီးတဲ့ လပြည့်နေ့ အမှတ် တရကြောင့် လူများတဲ့ နေ့ဆို ဘုရား မသွားတော့ပဲ အိမ်မှာပဲ ဘုရား ရှိခိုးပြီးနေလိုက်ပါတော့တယ်။
အခုတလော မိုးတွေတော်တော်ရွာတယ်နော် … မိုးရွာရင် အိမ်နားက ဈေးဆိုင်ကိုတောင် သွားလို့မရဘူး … မြောင်းတွေပေါ်ကိုရေမြုပ်နေတော့ ဘယ်နားက အပေါက်လဲဆိုတာမမြင်ရပဲ မြောင်းထဲကျတဲ့သူတွေ ခဏခဏပဲ … မိုးရွာရင် တံခါးတွေလုံအောင်ပိတ်ပြီး ဓါတ်မီးကို ကိုယ်နဲ့မကွာဆောင်ထားရပါတယ် …
မိုးကြီးတိုင်း မသွားဘဲ အိမ်ထဲမှာကုပ်နေရင် ပေါသက္ခရတနာမိုးရွာချတဲ့အခါ လွတ်သွားလိမ့်မယ်။ မိုးရေလား ရတနာတွေလားဆိုတာ အပြင်လေးဘာလေးတော့ ထွက်ကြည့်သင့်တယ်။ :cool:
ဒီရက်တွေ မိုးကြီးလွန်းလို့ အတိတ်က မိုးကြီးတဲ့ နေ့ တနေ့ အကြောင်း သတိရပြီး ပိုစ် တခု ချ ရေးလိုက်တာပါ။
မိုးကလည်း အညိုးနဲ့ ရွာသလား ထင်ရတယ်။ မိုးရွာရင် ဖုန်းပျက်.. ဖုန်းပျက်ရင် အင်တာနက်ပျက်.. တိုက်ရိုက် အချိုးကျလို့.. ရွာထဲလည်း မ၀င်နိုင်.. ခဏ တဖြုတ် ရတဲ့ အချိန်လေး သူများ ရေးတာ အလုအယက် တက်ဖတ်ပြီး မန်းနေတာနဲ့ မိုးချုပ်ပြီး အိပ်လိုက်ရတယ်.. အင်တာနက်ကို တော်တော် စိတ်ရှည်ရှည် စောင့်ရတယ်။
မဲသူဖြူ၍ ညိုသူဖွေးစေမည်ဖြစ်ကုန်ရင်တော့ အခက်ဘဲနော်
ဆူး…အဲဒါဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်ကလည်း… ဘလည်းတစ်ခါကြုံ၇ဘူးလို. ကြာပြီ
၈၉ ၉၀ လောက်က ထင်တာပဲ.. ခုနှစ်ကတော့ သေချာ မသိတော့ဘူး။
အတိတ်က ပုံရိပ် သဘောမျိုး မှတ်မိတာလေးပဲ ရှိတာ စာ အဖြစ် ချ ရေးလိုက်တာပါ။
မိုးကြီးရွာပြီး ရေတွေကြီးလို့ ပျော်ခဲ့ရတာကို သတိရမိတယ်။ ငယ်ငယ်က မိုးတွေအရမ်းရွာရင် ရေချက်ခြင်းတက်ပြီး လမ်းတွေရေမြုပ်လို့ ကျောင်းပိတ်တယ်။ အဲဒါကြောင် တစ်မြို့လုံး အင်းလေးလို လှေကလေးနဲ့ သွားကြရတယ်။ လူကြီးတွေနဲ့ မြို့ပြင်နားမှာ သပြေသီးမှည့်သွားကောက်ကြရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ ရေထဲကို သပြေသီးမှည့်ပြုတ်ကျသံ ပလုံပလုံက ဆိုင်းတီးသံလိုပဲ။ ရေပေါ်ပေါ်နေတဲ့ သပြေသီးမှည့်ချဉ်ချဉ်လေးတွေကို စားရတာလည်း အရသာတစ်မျိုးပေါ့။ စိမ်းတဲ့ အသီးတွေကျတော့လည်း ဖန်ပြန်ရော။
အန်တီ ရေကြီးတဲ့ အချိန် လှေစီးပြီး လျောက်သွားတဲ့ အကြောင်း သပြေသီး မှဲ့ ကောက်စားတဲ့ အကြောင်း ရေးပါလား.. အားပေးမယ်နော်။
ဆူးပြောမှ အိုင်ဒီယာရသွားပြီ။ ရေးဦးမှ။
ဟားဟားဟား…ဟား အရပ်ကတို. ရေ ဆူးမတစ်ယောက် အခုမှ ၂၇နှစ်ပဲရှိ သေးသတဲ. ဗျို. အလစ်မှာ မေးလိုက်တာ ပေါ်ပြီ
ဟင် အဘဆွေ သူ က ၂၇ နှစ်ပဲ ရှိသေးတာလား ။ဟိုတစ်ပါတ် လောက် က ၄၀ တန်းလို့ ရေးထားတဲ့ ထဲ မှာ သူ ရော ပါသလားလို့။ အဘဆူး သေချာတယ် ဆိုရင်တော့ သူ့ ကို အဘွားလေးဆူး လို့ ခေါ်မယ် ဗျာ ဟီဟိ
တခြား လူတွေက ၄၀တန်း လို့ ရေးထားတာ..
ဆူး က ၃၀တန်းထဲ ပြောလို့ ရနေပြီ လို့ ရေးထားတာ သေချာလည်း မဖတ်ပဲနဲ့..
မရတော့ဘူး အဘွားလေးဆူး က အဘွားလေးဆူး ပဲ ။ သား ကတော့ ဘွားဆူး လို့ ပဲ ခေါ်တော့မယ် ။ ဟီဟိ
အခေါ်အဝေါ်က အရေးမကြီးပါဘူး မောင်ပေ ရယ်..
လေးစား သမှု နဲ့ ခေါ်တယ် သဘော ထားလိုက်ရင် ပြီးတာပဲ..
အဘွား အဘွားလေး ဆိုတော့ အလိုလို ၀ါကြီးသွားတယ်။
၀ါကြီးတဲ့ လူတွေ ပြောတဲ့ စကား လိမ်မာ ယဉ်ကျေးစွာ နားထောင်မှ ဖြစ်မယ်နော်..
ဆုံးမ စကား ပယ်ရှားရင် ဘွားလေး ကြိမ်လုံး အကြောင်းသုံးပါး မရွေးဘူး။ သဘောပေါက်.. ရွမ်းးးးးး (ကြိမ်းလုံးနဲ့ စားပွဲ ရိုက်တဲ့ အသံ) ဟွန့်… (မေးငေါ့ပြီး အံကြိတ်ပြီး အသံပေးလိုက်တာ)
အနော့်မှာလဲ မိုးသံကြားရင် လွမ်းစရာလေးတွေရှိဖူးတယ်
ငယ်ငယ်ကတော့ မိုးရွာရင် မိုးရေထဲမှာ ဘောလုံးကန်မယ် ..ရေတွေများလာရင် ရွာသွားပြီး လှေစီးမယ် ဒီလောက်ပဲသိတာ.. အခုတော့ တော်တော်စိတ်ညစ်ရမှန်းသိပြီ… သန်လျင်၊ကျောက်တန်း၊သုံးခွ၊ ခရမ်းမြို့နယ် တွေမှာ ရေတွေကြီးလို့ လယ်တွေ ရေတွေနစ်ကုန်ပြီ.. စိုက်ပျိုးပြီးသား စပါးတွေ အကုန်ပျက်မယ် ဆိုပါတော့….အော် ..ဒုက္ခ….ဒုက္ခ….ဒုက္ခ
အခု ရက်ပိုင်း မိုးတွေ ရွာလို့ အဲဒီ ဘက်မှာ ဒုက္ခများနေတယ် ပြောသံကြားတယ်။
မိုးရွာရင် ပြသနာ တက်တာကတော့ အိမ်မှာ အင်တာနက် မရတာပါပဲ။ စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းတယ်။ အင်တာနက်က ပျက်လိုက် လာလိုက်နဲ့.. ပိုစ်တင်ဖို့ စိတ်ကူးတောင် ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိဘူး။
ငယ်ငယ်တန်းက ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ မိဘတွေနဲ.ကွဲပြီး ဂေါပကရုံး ကိုရောက်ဘူးတယ်
အဲ.ဒီထဲက အခါကြီးရက်ကြီး ဆို ဘုရားမသွားဖြစ်တော.ဘူး
အသက် လေးငယ်ငယ်နဲ့ ဘွားဆူးဖြစ်သွားပြီ….
ဦးလေး စိတ်မပူနဲ့ ဦးလေးက ဆူး ထက် အသက်ကြီးတာ မသိကြသေးလို့ပါ.. အဟေးးးး
မိုးရာသီကတော့ အကြိုက်ဆုံးရာသီပဲ… မိုးသံကြားရင် ဘယ်လိုမှန်းမသိဘူး….
ဟုတ်ကဲ့ ။ ဘွားဆူး ဆုံးမ သွန်သင် တာ မှန်သမျှ လက်ခံနိုင်သလောက် လက်ခံ လိုက်နာပါမယ် လို့။ ကြိမ်လုံး နဲ့ ဆုံးမ မယ် ဆိုပါက လည်း ဆုံးမ ခံ ပါမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ။ ဘွားဆူး က ချစ်လို့ ဆုံးမမှာပဲ ဟာ ။ နော..
မိုးသိပ်ကြီးလို့ ရေတွေ တက်ရင် ရန်ကုန်လို့ မြို့မှာ ဆိုရင် ပြသနာက မြေကြွက်တွေ နေစရာ မရှိလို့ ဟိုကူး ဒီကူး.. အိမ်တွေထဲ ၀င်လာကြတယ်။
နယ်မှာ ဆိုရင် မြွေပြသနာ ရှိတယ်။
အော် အမဆူးကို ၄၀ လောက်တော့ရှိပြီတွက်ထားတာ အခုတော့ပေါ်ပြီ တော်ပါပေတယ်အဘဆွေရယ်
၃၀ တန်းထဲပြောလို.ရနေပြီဆိုတော့မတိမ်းမယိမ်းပါပဲ.. ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အထက်ဆီနီယာဆိုတော့လေးစားသမှု
အဘွားလေးလို.ရက်ရက်စက်စက်မခေါ်ပါဝူး :D :D :D :-) :-)
အခေါ်အဝေါ်ကတော့ ဘယ်လို ခေါ်ခေါ် အရေးမကြီးပါဘူး။
ခင်မင်လို့ စနောက်တဲ့ သဘောနဲ့ ခေါ်တာဆိုတော့ စိတ်ထဲ မထားပါဘူး။
အပေါ်က ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ ကွန်မန့်မှားသွားလို့ ဖျက်ပေးပါဦး ကိုခိုင် နဲ့ သက်ဆိုင်သူများရေ။